RASMI: Kooxda AC Milan oo Macallin cusub Magacaabatay – Gool FM
(Milano) 19 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa si rasmi ah macallinkeeda cusub ugu Magacaabatay Tababare Marco Giampaolo.
Tababarihii hore Sampdoria, Marco Giampaolo ayaa noqon doonta macallinka cusub ee Milan, waxaana uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo labo sanadood ah, isagoo dookh u haysta in heshiiskiisa lagu kordhin karo hal sano oo kale haddii loo baahdo.
Waxa uu ka soo tagay Sampdoria kaddib markii uu saddex xilli ciyaareed ku qaatay, waxaana Giampaolo uu Milanello u saxiixay heshiis labo sanadood ah, kaasoo la rumeysan tahay inuu xilli ciyaareedkiiba ku qaadan doono adduun dhan 2 milyan oo euro.
“AC Milan waxa ay ku dhawaaqaysaa in Marco Giampaolo uu yahay macallinka cusub ee kooxda koowaad, waxaana uu soo howl-geli doonaa laga bilaabo 1 bisha July, heshiiskana waxa uu tixnaan doonaa illaa 30-ka bisha June sanadka 2021-ka, inagoo dookh u haysanna inaan heshiiskiisa ku kordhino sanad kale oo aan gaarsiino illaa bisha June sanadka 2022-ka” ayuu u dhignaa bayaan ka soo baxay kooxda Milan.
“Marco Giampaolo ayaa ku dhashay Bellinzona 02 bishii August sanadkii 1967-dii, waxaana uu maamulay 324 kulan tartammada oo dhan intii lagu guda jiray xirfaddiisa ciyaareed, iyadoo 270 ka mid ah kulamadaas ay yihiin Serie A.”
“Giampaolo oo hadda ah macallinka kooxda koowaad ee AC Milan, waxa uu soo xaadiri doonaa maalinta koowaad ee tababarka la isugu diyaarinayo xilli ciyaareedka cusub ee Milanello ka qabsoomaya 9-ka bisha July.”
Giampaolo ayaa bedelaya Gennaro Gattuso, kaasoo Rossoneri ku hoggaamiyey kaalinta shanaad ee horyaalka Serie A xilli ciyaareedkan, sidoo kalena geeyey afar dhammaadka ama semi-finalka Coppa Italia.
Macallin Maurizio Sarri oo soo gaaray Turin oo lagu soo bandhigayo ka hor inta uusan Cristiano Ronaldo ku booqan Giriigga… + SAWIRRO